BQ sy CyanogenMod ary ny finday avo lenta ho an'ny herinandro ambony | Androidsis
Hanolotra ny finday avo lenta miaraka amin'i CyanogenMod amin'ny herinandro ambony ny BQ
alexis martinez | | Bq
Ny BQ dia iray amin'ireo orinasa nitombo indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ny orinasa Espaniôla dia nivoatra ary nanao fiakarana am-pahamendrehana amin'ny lafiny fitaovana. Tsy misy ifandraisany io raha nanomboka ny diany tamin'ny tontolon'ny finday ilay orinasa, amin'izay hitantsika anio eny an-tsena.
Ary koa, 2015, lasa taona mahafinaritra ityna ho an'ity orinasa Espaniola ity. Etsy andaniny, nitombo ny varotra ary ny mpanamboatra Espaniola dia nanamboatra akany amin'ireo mpanamboatra lehibe indrindra, eto Espana, iray amin'ireo mpanamboatra mivarotra telefaona finday be indrindra. Etsy ankilany, hitantsika fa nahavita fiaraha-miasa tena lehibe izy io, nitondra ny Android One ho any Espana izay misy vokany. Saingy tsy amin'ny fizarana Android hitantsika ny orinasa hatrizay, dia hitantsika koa ny fomba nitondran'izy ireo ny telefaona Ubuntu tany amin'ny tobiny, na dia tsy nisy fiantraikany nantenaina aza ity farany.
Na izany na tsy izany, BQ dia mpamokatra firoboroboana. Na dia herinandro vitsivitsy lasa izay aza dia niresaka momba ny terminal vaovao natolotry ny orinasa izahay, ny Aquarius X5Androany, miverina amin'ny fiampangana anay izahay hiresaka momba ny drafitra ho avy izay ananan'ny orinasa Espaniola.
BQ sy CyanogenMod
Ny orinasa, miaraka amin'i Telefónica sy ny vondrona CyanogenMod, dia hanolotra fitaovana vaovao amin'ny herinandro ho avy, satria ireo mpiara-miasa amin'ny vavahady MovilZona dia nanako ny vaovao. Ity fitaovana ity no smartphone voalohany Espaniôla mampiditra ny ROM an'ny vondrona mpamorona CyanogenOS ho fenitra.
Ny BQ dia manaraka ny dian'ny mpanamboatra sinoa OnePlus izay, araka ny fantatrao, dia nanomboka ny diany ambanin'ny ROM indrindra ho an'ny fitaovana OnePlus. Saingy nandritra ny taona maro, nanjary lavitra ny fifandraisana misy eo amin'ny orinasa roa tonta ary nanapa-kevitra ny OnePlus fa tsy hampiditra ny CyanogenOS ao amin'ireo tobiny. Zuk dia mpamokatra iray hafa izay lamaody ankehitriny noho ny fitaovany Z1, smartphone iray eo ambanin'ny CyanogenMod. Ny orinasa Espaniola dia maniry ny hanaraka ireo dingana ireo ary hiditra amin'ny dingana vaovao, amin'ity fomba ity, na dia tsy misy fanamafisana avy amin'ny orinasa aza ny momba ny lafiny teknika ananany dia hanana terminal mahery, tsara sy mora vidy miaraka amin'ny fanohanana tsara ao amin'ny rindrambaiko.
Hihaino tsara ny fizotran'ny herinandro ambony izahay hahalala bebe kokoa momba ity terminal ity izay hasehon'ny BQ, CyanogenMod ary Telefónica. Ny BQ dia tsy mitsahatra ny manaitra antsika, izany dia mitovy amin'ny zavatra mandeha amin'ny orinasa. Ary ho anao, Ahoana ny hevitrao momba ny hevitra momba ny fanombohan'ny BQ fitaovana iray eo ambanin'ny CyanogenMod ?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Bq » Hanolotra ny finday avo lenta miaraka amin'i CyanogenMod amin'ny herinandro ambony ny BQ
Ny manam-pahaizana Google dia mahita lesoka 11 amin'ny fiarovana amin'ny Galaxy S6 Edge ao anatin'ny herinandro
Fanadihadiana ny Doogee F5, Android Phablet manaitra amin'ny vidiny mihomehy